Asatọ Ihe Don'tmaghi Banyere M | Martech Zone
Ọ dị mma, dịkwa mma… Aga m ewere nke a site na Steven. Lee ihe 8 ị nwere ike ịbụ na ị maghị maka m:
N'afọ gara aga, emere m nsụgharị kasịnụ nke Lovehụnanya Abụ mgbe ọrụ. Chi ejiela, anyị atọ fọdụrụ n’ọfịs ya wee bịa na Redio Ntanetị. Ka m na-eme egwuregwu ikpeazụ m, onye isi m na-agagharị n'akụkụ - ọ na-akpọrọ nwanne ya nwoke gaa njem n'ụlọ ọhụrụ anyị. Ama m… do-do-do-do do Ama m….
Deborah, eyeneka mi an̄wan, ekedi Britannica Britannia (sp?) Jeans nwa agbọghọ n'etiti 80s. Inwe ndị enyi gị ka ha kwurịtachaa banyere isi nwanne gị nwanyị nwere mmetụta na-adịgide adịgide nke uche. Enwere m obi ụtọ na ya n'agbanyeghị na anyị anaghị ekwukarị okwu.
Otu n’ime ọrụ kacha mma m nwere bụ Kaadị Ihe Nweta Telemarketing na Highlọ Akwụkwọ sekọndrị. Ana m arụ ọrụ izu 2 ma ghara itinye aka na onye ọ bụla. Agbalịrị m ya maka izu 2 n'ihi na papa m kwuru na m gaghị akwụsị ọrụ ozugbo… ga-amụta ihe mgbe niile. N'okwu a, amụtara m na papa m anaghị adị mma mgbe niile.
Ezigbo enyi m na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ka bụ ezigbo enyi m, afọ 20 mgbe e mesịrị. Mike anaghị agụ blọgụ m - mana anyị ka na-ekwu okwu kwa izu ọ bụla. Ya na nwunye ya enweghị atụ.
Izu a enwere m ike ịzụrụ ihe ịkwa emo na nke jọgburu onwe m nke ọrụ ịde blọgụ - ihe ndọta 24 'maka ụgbọ ala m:
N’abalị abụọ gara aga, ị nwere ike ịhụ m n’ịntanetị ọ bụla n’abalị ọ bụla Egwurugwu isii na XBox Live.
My blog ugbu a averages ihe karịrị $ 500 kwa ọnwa na revenue, nnukwu isi ịbụ Ederede Njikọ Mgbasa ozi.
N’isi izu ụka a aga m abata Npr kwurita banyere itinye n'ọrụ ihe dị n'ịntanetị iji meziwanye mkparịta ụka ụgwọ ọnwa gị. Ọ bụ ezigbo mkparịta ụka na-atọ ọchị mana enweghị m ume n'ihi na m kwesịrị ịgba ọsọ site na ọrụ gaa ebe a na-adọba ụgbọala na ọdụ redio na-erughị nkeji iri abụọ. Amaghị m otú ọ ga-esi pụta! M nwetara Ajụjụ ọnụ n'ihi na m kwuru na a website ebe m na-eji a Nkwupụta ụgwọ ọnwa onwe gị kpakorita ugwo m ugwo ma m nwekwa online Payraise mgbako.
Echere m na mfeelarị ndị ọzọ ụdị meme a, yabụ na agaghị m ebugharị onye a - mana achọrọ m ịza ya!
Aug 2, 2007 na 11:24 PM
Dị ka a n'akụkụ dee m ụtọ na ụfọdụ-otu na-akpata ego na TLA n'ihi na m na-eme ka a pasent hapụ naanị ihe ọ bụla mgbasa ozi mgbe gosiri .. na m gbalịrị na 3 seperate n'oge. Ọbụna m nwere mgbakwunye ha n'ọnọdụ ma rụọ ọrụ .. maka m ọrụ ahụ enweghị isi.
Not that AdSense is any better but at leat their ads show up… M na-eleghá »‹ anya na-eme ihe kará »‹ ezu ihe na-ezighi ezi ma á »bá» is ndá »‹ iwe na-ahá »seeing há» weeks izu na-agafe na-enwe chioma na-eme otu ego.
errr .. ooppsss… ndo banyere akụkụ rant LOL
Kpọgidere ebe ahụ na TLA. Ekwenyere m na mgbasa ozi na- zoro ezo maka ndị nchịkwa nke blog. Ozugbo m nwetara otu onye nkwado, ha malitere ịtụgharị na nke ahụ. Echere m na ihe adịghị mma, mana ọ bụ nnukwu usoro.
Aug 3, 2007 na 10:10 PM
Oh na m na-ejide na TLA ebe ọ bụ na mbụ ha dị ma enwebeghị m mgbasa ozi ọ bụla gosipụtara .. mgbe .. Agbalịrị m ọrụ ahụ na oge atọ dị iche iche na oge ikpeazụ a na koodu ahụ nọ ebe ihe karịrị ọnwa 3… na odi nada
Ọbụna AdSense na-egosi na ọ bụ ibu nke ndakpọ olileanya… Enwere m ike ịnwe ụbọchị nwere echiche ezi uche dị na peeji ma ghara ime cent (maka izu na njedebe). Achọrọ m Adsense guru iji nyere m chee echiche 'kpatara m ji n'aka na m nwere ike ịme ihe na-ezighi ezi… na-ekweta na ọ nwere ike bụrụ ikpe ahụ ka anaghị enyere aka nkụda mmụọ maka nke netwọọdụ mgbasa ozi ọ bụla.
oh well… ezu nke hijacking gị post kwuru Doug 🙂 ndo ma ọ bụ ihe na-emetụ n'isi ugbu a
Daalụ maka Ama Njikọ Ederede.
You nwere ezigbo ebe ịzụta
ụgbọ ala ndọta? Emechara m
otu wee dee banyere ya na blog.
Daalụ maka ịga …….
Ọ bụ post gị mere ka m nwee mmụọ nsọ! M nyere iwu ya Ebe Graphics ma nata ya n'ime ụbọchị 2. Ọnụahịa ahụ dị egwu, mana m na-atụ ụjọ na anaghị m elebara nha anya enough ọ bụ nnukwu! 🙂
Akwa! Obi tọrọ m ụtọ na ihe m kwuru na
foto nyeere. Nnukwu dị mma ma
mfe ọgụgụ. Daalụ maka
njikọ iji chọpụta ọnụahịa ahụ.
Hụ ọdụ ọdụdụ n'anya. Kedụ maka inwe akara ngosi etinyere n'akụkụ ala ụgbọ ala gị kwa maka mmetụta kachasị 😉
Aghaghị m ịnwale TLA ọzọ oge ụfọdụ wee hụ ma ha anabatara m oge a. AdSense ruru m 50% n’ọnwa gara aga mana anyị anaghị ekwu maka ego ebu 🙂